Kulan looga hadlayey arimaha barbaarinta ubada oo caruurta Somalia lagu eegay – SBC
Kulan looga hadlayey arimaha barbaarinta ubada oo caruurta Somalia lagu eegay
Posted by editor on Juun 27, 2011 Comments
Kulan looga hadlayay bar baarinta ubadka iyo kordhita kaalinta dhalin yarada dunida islaamka uuna soo qaban qaabiyay ururka Islaamka waaxdiisa waxbarashada ayaa lagu qabtay magaalada Rabat ee Boqortooyada Morocco 15 kii bishan, waxaa kasoo qayb galay dhammaan danjirayaasha dunida islamka ee fadhiya Rabat iyo wasiiro ka kala socday dalalka Tuunisiya iyo Morooko.
Hadalaladii laga jeediyay kulankaas ayaa ahaa kuwo aan looga baran dunida islaamka inteeda badan gaar ahaan dhulalka Carabta ee madaxda kali taliskaa ay xukumaan.
Wasiirka Waxbarashada ee Tuunis Dr Dayib Bakuush ayaa ku fogaaday dhibaatada xukunka kali taliska ah iyo iska dhaga tirka rabitaanka shucuubta la xukumo, wuxuu yiri waxaa laga dhaxlay talisyada kali xukunka ah Musuq maasuq iyo rajo xumo soo wajahday guud ahaan bulshada gaar ahaan dhalin yarada.
Aadam Xassan oo isna hadal ka jeediyay ayaa tibaaxay inay Soomaaliya dhibaata wayn ku qabyo gar gargaarka iyo hay’adaha sheega inay ka shaqeeyaan arimahaa bini aadamka iyo dareen laawayaal u dhashay Somalia ,wuxuu sheegay inuu baahay musuq maasuq midka ugu xun akhlaaq xumo iyo raja beel lagu abuuray dhalin yarada somaliyeed taasina waxay dhalisay inay kuwa badan qoriga xanbaaraan qaarna naftooda halaag u hor seedaan.
Dalka iyo dadka somaliyeed waxaa cunaha ku dhagan oo inuu khayraadkiisa ku tashado ka hortaagan kooxo burcad ah ayna ahayd inay iyagoo kale xabsiyada ku jiraan qaar badn waxy ka mid yihiin Dawladda KMG iyo maamuladda Gobolada qaar ka jira waxaa si wayn kuwaas u garab taagan waxa loogu yeero Beesha Caalamka oo ah qaybta ugu way nee dhibaatada jirta.
Kaalintii Bar baarineed ee ay waajibka ahayd inay fuliso wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta oo kaliya waxay gacanta u gashay shisheeye ku adeegta magaca somalida Doolaraadka ay soo aruursadaanna waxay ku baxdaa Hotelo safar iyo socodkooda , Somalia waxay haattan sida dhabtaa gacanta ugu jirtaa Burcad wajiya badan duniduna ay raali uga tahay iyagoo eegaya danahooda gaarka ah . dawada Somalia waxay ku jirtaa Somali oo kaliya waa marka Somali dhab ah xukunka yimaadaan .
Raja xumada haysatta dhalin yarada somaliyeed waxaa ka xanuun badan fasaadka iyo maskax maryka ku dhacay waxaana cuduradda ugu daran faafiya Hay’adaha ”Gargaarka” iyo kaaliyayaashooda musuqa ”NGO” Dadkii xabsiyada ku jiri lahaa ayaa inta badan xafiisyada Dawladda fadhiya.
Dr C/casiis Tuwayjari oo hadal kulul isna jeediyay ayaa sheegay inay Madaxda kali xukunka ah hantida shucuubta ku shubaan jeebabkooda halkii ay shacabka siin lahaayeen xuquuqdooda .
Tuwayjari oo ka hadlay dhibka Somalia ka jira ayaa sheegay inay tahay dhibaato xalkeedu Somali leedahay laakiin ay faraha u gashay Dad aan damiir lahayn iyo cadaw doonaya inay Somalia noqoto imaarado aan awood lahayn , wuxuuse ammaan u jeediyay wasaaradda wax barashada oo 20 sano kadib hawsheedii inay qabato bilowday.
Yuusuf Maxamed Maxamuud (Yuusuf Yare)